Fitsarana voka-pifidianana :: Torohan'ny HCC ireo kandidà mikasa hanao tsindry ankolaka • AoRaha
Fitsarana voka-pifidianana Torohan’ny HCC ireo kandidà mikasa hanao tsindry ankolaka
Misy mitady hanao lalana ambanin’ ny tany ireo kandidà. Namoaka fanambaràna ireo mpikambana eo anivon’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC), izay mamaritra an’ireo fitsipika mifehy azy ireo sy ny fahefana ananany mikasika ny fikirakirana sy ny famoahana ny voka-pifidianana. Sady tototry ny fitoriana ireto mpitsara etsy Ambohidahy ireto no voalaza fa anaovan’ireo kandidà tsindry an-kolaka amin’ny fomba fitsarana ny voka-pifi­dianana.
Noho io antony io no namoahan’ireo mpikambana ao amin’ny HCC ny fanambaràna mazava mitory ny « tsy faneken’izy ireo » an’izany endrika fihoaram-pefy mitady hataon’ireo kandidà nandray anjara tamin’ny fifidianana depiote, tamin’ny 27 mey 2019 lasa teo izany.
Voalazan’io fanambaràna io fa: « ny HCC dia tsy mandray na manao fihaonana mano­kana amina kandidà, na iraka, na ny solontena na ny mpano­hana azy ireo. Tokony hana­raka an’ireo fitsipika sy ireo dingana rehetra voalaza mikasika ny fomba fametrahana fitoriana, mifanaraka amin’ny lalàna mifehy ny fifidianana sy manaraka an’ireo toromarika rehetra efa nanaovana fanentanana, ireo voakasik’izany ».
Notsipihin’ireo mpikambana eo anivon’ity andrimpanjakana ity hatrany fa : « miteraka sazy ho an’ireo mpikambana ao aminy ny tsy fanarahana ny fitsipika mifehy ny HCC ». Isan’izany ny mety ho fanaovana kiantranoan­trano amin’izany fikirakirana ny voka-pifidianana izany, ka hanomezana tombondahiny kandidà iray. Mety hihatra amin’ireo kandidà minia manao an’io tsindry io ihany koa anefa ny sazy aorian’izao fanambaràna nataon’ny HCC izao.
Tamin’ny fanambaràna voalohany nataon’izy ireo, tamin’ny herinandro lasa teo, no efa nanindrian’ny filohan’ ny HCC, Rakotoarisoa Jean Eric, mafy fa : “tsy azo ekena ny fanaovan’ny kandidà kara­zana tsindry amin’ireo mpikambana ao aminy amin’izao fe-potoana fanombohana ny fanamarinana ny voka-pifidianana sy ny fandraisana fitoriana manodidina ny fifidia­nana izao”. Amin’ny faran’ity volana jona ity kosa na amin’ny fiandohan’ny volana jolay 2019 ho avy io no hamoaka ny voka-pifidianana ofisialy tamin’iny fifidianana solombavambahoaka iny ity andrimpanjakana ity.